७ बर्षीय बालकको अभिनयले सबैलाई चकित बनायो !यसकारण सुपरहिट बन्ने छ मेरी मामु – Complete Nepali News Portal
७ बर्षीय बालकको अभिनयले सबैलाई चकित बनायो !यसकारण सुपरहिट बन्ने छ मेरी मामु
Kamal Sargam August 13, 2018
एउटा फिल्म न त्यसमा अनमोल के.सी, प्रदिप खड्का वा प्रियंका, साम्राज्ञी नै छन् । न त्यसमा छमछमी नाच्न लोकगीत नै छ, न त हिरो हिरोईनको लभ ड्रामा नै छ । केवल छ त आमा र छोराको सम्बन्धको मिठो कथा । अहिले बजारमा चलेका मसला र खुराक नहुंदा पनि भदौ १५ देखि प्रदर्शनमा आउने चलचित्र मेरी मामुको क्रेज दरो छ । दर्शकहरु फिल्मलाई व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । कारण के त ? कारण हो, सन्तोष सेनको स्थापित व्यानर अनि उनको प्रोमोशनको गज्जबको शैली । कारण हो, चलचित्रको शिर्ष गीत अनि बाल नायक आयुब सेनको कसैले नसोचेको अपत्यारिलो अभिनय । कारण हो, फिल्मको बिषयवस्तु ।
हो, मेरी मामुको चर्चा यतिबेला फिल्म जगतमा मात्रै हैन, बजार बजारमा अनि शहर शहरमा छ । प्रचार सामग्रीको रुपमा केवल एउटा गीत दर्शक मांझ ल्याएको मेरी मामु टिमको प्रचार प्रसार शैलीलाई मान्नुपर्छ । स्कुल स्कुलमा फिल्मको जानकारी, शहर शहरमा प्रोजेक्टर क्याम्पियन, आमासंगको सेल्फी प्रतिगोगिता अनि आमासंगको थाईल्याण्ड टुर, मेरी मामु फिल्मलाई हाईपमा ल्याउने अन्य कुराहरु भए । यतिमै मात्र निर्माता सन्तोष सेन रोकिने छैनन्, फिल्मको ट्रेलर रिलिज पश्च्यात् देशका महत्वपुर्ण शहरहरुमा फिल्म युनिट नै पुगेर रमाईलो कन्सर्ट आयोजना गर्दैछ । फिल्मको प्रचार प्रसारमा यति जोड किन ? सन्तोष सेनको सिधा जवाफ छ, राम्रो फिल्म बनाएर मात्रै हुंदैन, दर्शकलाई हलसम्म ल्याउन प्रोमोशन अत्यावश्यक छ ।
मेरी मामुको देशका हरेक ठाउंमा चर्चा भैरहंदा धरानमा फिल्मका अचम्मका फ्यान भेटिएका छन् । सुमित नामक एक फ्यानले फिल्मको नाम अंकित टिर्सट आफैले छपाएर बेच्न थालेका छन् र उनको टिर्सट किन्नेको घुईचो छ । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, मेरी मामुले इनिसियल व्यापार नै आक्रामक गर्नेछ । सर्वसाधारण मानिसमै फिल्मप्रतिको यो मोहका कारण आफ्नो प्रोमोशन स्ट्याटेजि सफल भएको निर्माता सेनको बिश्वास छ । यम थापा निर्देशित मेरी मामु फिल्ममा आयुब सेनसंगै कुसुम गुरुंग, अश्लेषा ठकुरी, सारुक ताम्राकार आदि कलाकारहरुको मुख्य भुमिका छ । आमा र छोराको सम्बन्ध फिल्मको मुल कथा हो, यद्यपी कुनै साधारण कथामा यो फिल्म बनेको छैन, फिल्मको गीतले यहि देखाउंछ र दर्शकहरु फिल्मभित्रको सत्यता थाहा पाउन आतुर छन् । त्यसको लागि कुर्नैपर्छ, भदौ १५ ।
6 सेकेन्ड अगाडि